Malagasy4all: Short announcements: filazana sy fampandrenesana
Listen to the information and match with the concerned photo
a-Ampandrenesana ny mpampiasa ny fitanterana iraisana rehetra eto Antananarivo renivohitra fa mitokona ny mpitatitra rehetra ka tsy misy na ny bisy na ny taxibe. Hiverina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana rahampitso maraina.
b-Ilazana ny mpitondra fiara eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina fa tsy misy ny lasantsy sy ny solika samy hafa eny amin’ny mpitsinjara, ka iangaviana izy ireo tsy hanao filaharana lavareny na hanimba ny fitaovana. Hiverina amin’ny laoniny ny fandehanjavatra rehetra androany amin’ny fito ora hariva.
c-Rarana ny manipy sigara amin’ny tany, na mandrora paraky. Voan’ny sazy mihatra avy hatrany izay tratra mandika lalàna.
d-Iangaviana ny mpivarotra amorondalana rehetra mba tsy hanelingelina ny mpitondra fiara fitaterana fa hijanona eny ambon’ny trottoir ihany rehefa mivarotra fa tsy midina andalam-be.
e-Ampandrenesina ny mpitsidika ny faritra rehetra fa misy aretina ny manga nanaovana ny lasary manga ka iangaviana izay nividy lasary manga amin’ny tavoahangy mba hamerina izany faingana amin’ny mpivarotra fa onerana ny volany.